Myanmar Receives Improved Ease of Doing Business Ranking | Myanmar Business Today
HomeInvestment & FinanceMyanmar Receives Improved Ease of Doing Business Ranking
Tin Mg Oo & Ei Thandar Tun/Myanmar Business Today
In recent years Myanmar stood unchanged at 171 for the World Bank’s Ease of Doing Business ranking. However, the country was recently listed in the top 20 most improved in Ease of Doing Business along with Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, China, Djibouti, India, Jorden, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Tagistan, Togo, Uzbekistan, and Zimbabwe.
In 2020 Myanmar moved up6places and now sits at 165.
Myanmar was not included in the Ease of Doing Business ranking until 2013. At that time it was ranked at 177 out of 190 countries. In 2016 it was ranked at 170.
Factors considered in assessing countries for Ease of Doing Business are as follows:
Yangon adopted stricter rules for architects and engineers in order to ensure high quality construction. In addition, improvements to Yangon’s infrastructure was made, particularly the sewage and waste management system.
Myanmar launched an online registration platform for company registration. The platform has reduced the number of procedures required for registeringacompany within the country.
The country also made property registration faster by streamlining deed registration and appraisal steps.
The Union Supreme Court started issuing reports so that the performance of the courts can be assessed and measured.
Myanmar passedanew Company Act requiring companies to disclose their activities for interested investors, enhancing responsibility of the directors ofacompany and strengthening transparency of companies. These changes have reinforced protection of minority investors.
When preparing for the Ease of Doing Business Ranking, the World Bank makes the survey both in the private and public sectors.
“The government is now implementingaproject bank and land bank led by the president’s office. This is done with the aim of assisting investors to createabusiness friendly environment,” said U Thaung Tun, Union Minister of the Ministry of Investment and Foreign Economic Relations.
The World Bank issued the Ease of Doing Business report for 2020 on October 24. Myanmar officials have been meeting with the World Bank’s Doing Business Mission since 2018. The country has the goal to be ranked among the top 100 Ease of Doing Business by 2020.
“It should not be hard for us to continue to improve becauseanumber of ministries have already changed their policies and procedures. But, when it comes to land issues, it is still confusing. Moreover, labor issues are stillaproblem,” said U Zaw Min Win, President of the Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry.
Dr. Than Myint, Union Minister of the Ministry of Commerce, also said that the government is trying to cut back the red-tape that often delays investments which could create more jobs.
Last fiscal year, the volume of foreign direct investment did not meet the target amount. Receiving the improved Ease of Doing Business ranking could lure more investment into the country over the coming years.
In the investment promotion plan, Myanmar expects to seeatotal of $200 billion total investment by 2036. Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the country, said at the investment forum in Tokyo, Japan, that in 2020 Myanmar will become the fastest growing economy in ASEAN.
The World Bank has also estimated that Myanmar’s GDP will grow. The country’s GDP growth was 6.4 percent in Fiscal Year 2016 and 2017. In FY 2018 the country saw 6.7 percent growth. The World Bank estimates that the growth will be7percent for FY 2019.
In addition to such growth, business leaders stress the need for strong policies that will stabilize the economy. Doing Business Mission who conducts the survey for the Ease of Doing Business ranking, will meet with local business leaders for their views. If Myanmar continues to improve its Ease of Doing Business ranking over the coming years it will continue to see more interest from foreign investors.
၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်များအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူမှှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အဆင့် ၁၇၁ တွင် နှစ်နှစ်ဆက်ရှိခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှှုရှိသော နိုင်ငံ၂၀ တွင်ပါဝင်လာပြီးနောက်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် သတ်မှတ်ချက်တွင်တော့ ယင်းအဆင့်ထက် လျော့နည်းလာနိုင်သည့်အကြောင်း မြန်မာအစိုးရကမျှော်လင့်နေသည်။ အဆိုပါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်ပါဝင်လာခဲ့ပြီး
နိုင်ငံပေါင်း၁၉၀ အနက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင် ပျှမ်းမျှအဆင့် ၁၇၂ ရှိခဲ့ကာ စတင်သတ်မှတ်ခံရသည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၁၇၇ အထိရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်တော့ အမြင့်ဆုံးအဖြစ် အဆင့်၁၇၀ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော တိုးတက်မှုစာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံန ှင့်အတူ အဇာဘိုင်ဂျန် ၊ ဘာရိန်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တရုတ်၊ ဂျီဘူတီ ၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျော်ဒန်၊ကင်ညာ၊ ကိုဆိုဘို၊ ကူဝိတ်၊ ကာဂျစ်စတန်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ပါကစ္စတန်၊ ကာတာ ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ တာဂျစ်စတန်၊ တိုဂို၊ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတို့ပါဝင်လာသည်။
မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လာရသည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြန်ထားရာ ယခုကဲ့သို့ ဖော်ပြထားခဲ့သည်။
(က) ဆောက်လုပ်ခွင့်ရယူခြင်း (Dealing with Construction Permits)
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများအတွက် ပိုမိုတင်းကျပ်သည့် အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်းအားဖြင့် ဆောက်လုပ်မှုအရည် အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို အားကောင်းစေခဲ့ပြီး ရေနှင့်အညစ် အကြေးစွန့်ပစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံတို့တွင် လည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အွန်လိုင်းစနစ် စတင်ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့သည့် အတွက် လုပ်ငန်းအဆင့်များစွာကို လျှော့ချနိုင်သည့်အပြင် လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆောင်ရွက်ရသည့် လိုအပ်ချက်ကို လည်း လျှော့ချနိုင်ခြင်း။
ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလည်း စာချုပ်စာတမ်း မှတ် ပုံတင်ခြင်းနှင့် တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို လျှော့ချ၍ အဆင်ပြေအောင် ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုမြန်ဆန် အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း။
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် တရားရုံးများ ၏ စွမ်းဆောင်ချက်များကို တိုင်းတာနိုင်သည့် အစီရင်ခံစာ များ စတင်ထုတ်ပြန်ခြင်း။
ထို့ပြင် နိုင်ငံ၏ကုမ္ပဏီဥပဒေအသစ်သည် ကုမ္ပဏီများ ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို စိတ်ဝင်စားသူများ သိရှိနိုင်ရေး ပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသစေခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများ၏ တာဝန်ရှိမှုကို တိုးတက်လာစေခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်ရန် လိုအပ်လာစေခြင်းဖြင့် အနည်းစု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ် အကာအကွယ်ပေးမှုကို အားကောင်းစေခဲ့သည်ဟု စီးပွားရေးကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က စစ်တမ်းများကောက်ယူသည့်အခါတွင်တော့ အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုကိုပဲ မေးမြန်းကောက်ယူခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပြည်တွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များထံလည်း မေးမြန်းကောက်ယူလေ့ရှိတာပါ။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှှုများကိုလုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတွေက သိရှိမှှု နည်းပါးသည့် အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က စုံစမ်း မေးမြန်းလာတဲ့အခါမှာတော့ နားလည်မှှုတစ်ချို့လွဲနေသည်များရှိနေကြောင်း အစိုးရပိုင်းက ဆိုထားပါသည်။
“ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့် သူတွေကို အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ Project Bank တို့ Land Bank တို့ကိုလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ဦးဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိပါတယ်။ ဒါက အစိုးရအနေနဲ့ စီးပွားရေးဝန်းကျင် တစ်ရပ်ကိုဖန်တီးဖေါ်ဆောင်ခြင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဆင့်က အရင်နှစ်ထက်ပိုပြီး သိသိသာသာ တက်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းက အစိုးရ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူမှု အစီရင်ခံစာကို အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် တရားဝင်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာအနေဖြင့်အဆင့်တိုးတက်လာရေး Doing Business Mission နှင့်၂၀၁၈ ခုနှစ်က စတင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အရောက်တွင် Ease of Doing Business သတ်မှတ်ချက်တွင် အဆင့် ၁၀၀ အောက်ရောက်ရှိရေးမျှော်မှန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လာမည့်အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။
” အခု ဝန်ကြီးဌာနတွေ တော်တော်များများက ပေါ်လစီတွေ ၊ ပရိုစီဂျာတွေ ပြောင်းလဲခဲ့ကြတဲ့အတွက် သိပ်တော့မခက်တော့ဘူး သို့သော်လည်း မြေယာကိစ္စမှာတော့ တစ်ကယ်လာပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမယ်ဆိုရင် ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှှုဖြေရှင်းရေးကလည်းအဓိက ပြသနာဖြစ်နေပါတယ်”ဟု ကုန်သည်များနှင့် စက်မှှုလက်မှှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းက ဒုတိယသမ္မတနှင့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရေး အတွက် ကြန့်ကြာမှှုများကြုံတွေ့နေရသည့် ကြိုးနီ စနစ်ကို ဖယ်ရှားဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းမြင့်က လည်း ဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုအားဖြင့်မျှော်မှန်းချက်အတိုင်း မရောက်ခဲ့သော်လည်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွင်းယခုထက် ကိန်းဂဏန်းလျော့သွားပါက လာမည့်နှစ်များအတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုကို ဖိတ်ခေါ်ရာရောက်မည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွင်လည်း ရေရှည်ရည်မှန်းချက်သည် ၂၀၃၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှု ကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ အထိရှိလာရန်ရည်မှန်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်က ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တွင် ပြလုပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုဆွေးနွေးပွဲတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လာမည့်နှစ်တွင် အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာမည်ဟု ထည့်ပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ GDP တိုးတက်မှှုနူန်းအရ တိုးတက်လာစရာရှိနေသည်။ ၂၀၁၆−၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှှုန်း ရှိခဲ့ရာက ၂၀၁၇−၂၀၁၈ ဘဏ္ဍနှစ်မှာလည်း အလားတူ အတိုင်းရှိနေခဲ့သည်။ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင်းတက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ ၇ ရာခိုင်နူန်း အထိ တက်လာမယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းထားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူ တဖက်တွင်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက အစိုးရအနေဖြင့် တည်ငြိမ်သည့် စီးပွားရေး ကဏ္ဍတစ်ရပ်ပေါ် တွင်းလာစေရန် တိကျသေချာသည့် မူဝါဒ ချမှတ်မှှုများက အလွန်အရေးပါနေကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုကြသည်။ Doing Business Mission အနေဖြင့် အောက်တိုဘာ လမကုန်မီပြည်တွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှှုတွေလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သိသိသာသာအဆင့်မြင့်တက်လာမည့်အရေးသည် လက်ရှိအစိုးရ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြုပြောင်းလဲမှှုဖြစ်ပေါ် စေမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လည်း မှတ်ချက်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိသည်။
Previous articleMyanmar Expects $200 Billion FDI Over the Next 20 Years
Next articleMicrofinance Forum to be Held in Naypyidaw